Matthijs de Ligt oo sharaxay sababta uu Juventus uga doorbiday kooxda Barcelona – Gool FM
Matthijs de Ligt oo sharaxay sababta uu Juventus uga doorbiday kooxda Barcelona
(Turin) 18 Luulyo 2019. Daafaca da’ada yar ee reer Holand Matthijs de Ligt ayaa shaaca ka qaaday sababta uu kaga door biday Juventus, dhamaan kooxa waaweyn ee Yurub, kuwaasoo doonayay inay helaan adeegiisa, oo ay ku jiraan Barcelona, ​​Paris St Germain iyo Manchester United.
Kooxda Juventus ayaa maanta oo khamiis ah xaqiijisay iney la saxiixdeen da’yarka daafaca kaga ciyaara qaranka Holland Matthijs de Ligt kaas oo ugu soo wareegaya adduun dhan 85.5 Malyan oo Yuuro.
Matthijs de Ligt ayaa ka warbixiyay sida uu ula dhacsan yahay falsafadda difaaca ee dalka Talyaaniga, taasoo uu ku tilmaamay inay tahay sababta ka dhigtay inuu ka doorto Juventus dhamaan kooxaha kale, wuxuuna sheegay inuu ka murugeysan yahay ka dhaqaaqista kooxdiisii hore ee Ajax.
Daafaca da’ada yar ee reer Holand Matthijs de Ligt ayaa ayaa u sheegay warbaahinta:
“Waxaan mudo 10 sano ah u soo ciyaaray kooxda da’ayarta ah ee Ajax, iyo saddex sano oo aan la qaatay kooxda heerka koowaad, lakiin nasiib daro waa inaan talaabo hore u qaadaa”.
“Mar walba waxaan la yaabaanaa farsamada difaaca ah ee Talyaaniga, ciyaartooy fara badan oo aan kaga daydo kubadda cagta waxay u dhasheen dalka Talyaaniga, sida Maldini, Franco Baresi, Nesta iyo Cannavaro, waxaan sheegi karaa magacyo badan”.
Waxaa xusid mudan in Juventus ay kaga guuleysatay saxiixa xiddigaan kooxo badan oo yurub ka dhisan sida: Man Untied, Barcelona, Bayern Munich & Paris Saint Germain, wuxuuna noqonayaa muddo kadib Holandes-kii ugu horreeyay ee kooxda u ciyaara.
Muxuu salka ku hayaa khilaafka soo kala dhex galay madaxweyne Florentino Perez & Zinedine Zidane?
Toni Kroos oo balan qaad adag sameeyay kahor xili ciyaareedka cusub ee 2019-2020